Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola baseSpain I-Dani Ceballos Ingane Yendaba Yobuntwana I-Untold Biography Amaqiniso
I-LB inikeza iNdaba Egcwele Ye-Football Genius eyaziwa ngesidlaliso "Dani“. Indaba yethu kaDani Ceballos Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube manje.
UDaniel Ceballos Ubuntwana Bendaba- Ukuhlaziywa Kuze Kube Namuhla. Credits to I-AsEnglish, Arsenal kanye no-IG
Ukuhlaziywa kwethu kufaka phakathi impilo yakhe yobudala, isizinda somndeni, imfundo nokwakhiwa kwamakhono, impilo yomsebenzi wasemncane, indlela eya endabeni yodumo, ukukhuphuka kudumo lendaba, ubudlelwane nempilo yomuntu siqu njll.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngamakhono akhe okudala e-Midfield, okuyinto emthole enconywa ngabasekeli be-Arsenal. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka i-Biography kaDani Ceballos 'ethokozisayo impela. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
I-Dani Ceballos Ingane Yendaba Yobuntwana kanye ne-Untold Biography Amaqiniso- Isiqalo sokuphila
Kuqala, amagama akhe aphelele nguDaniel Ceballos Fernández. UDani Ceballos njengoba ejwayele ukubizwa kanjalo wazalwa nge-7th Agasti 1996 kunina, uSalomé Fernández nobaba wakhe, u-Antonio Ceballos kuMasipala wase-Spain e-Utrera. Ngezansi isithombe sabazali bakhe abathandekayo.
UDani Cabellos Bazali
Umndeni kaDani Cabellos unemvelaphi yawo nezimpande zazo ezivela eSevilla, inhloko-dolobha yeSouthern Spain. Basuka edolobhaneni elincane lase-Utrera elithathwa njengelesibalo senkunzi elwayo. Uthi bewazi?… I-Utrera iyidolobhana sekwephuzile Jose Antonio Reyes owabulawa ngoJuni 1st 2019 ngesikhathi imoto yakhe iMercedes Brabus S550V ihamba ngomgwaqo u-A-376 eduze nase-Utrera.
Isizinda Somndeni SikaDani Ceballos. Credits to DepositPhotos and Espanafascinante.
UDani Ceballos wakhula eceleni kukadadewabo wengane yakhe uSalome Ceballos. Wazalwa njengomntwana wokuqala futhi indodana yathola izingane ezimbili kubazali bayo. Ngokungafani nomuntu waseSpainard UGerard Deulofeu, UDani wayengumuntu ozolile futhi oqoqwe njengomfana omncane. Ngezansi isithombe sakhe sinokubukeka komfana okumnene.
UDani Ceballos- Izinsuku ezikhulayo
I-Dani Ceballos Ingane Yendaba Yobuntwana kanye ne-Untold Biography Amaqiniso- I-Education ne-Career Buildup
Uqhamuka emzaneni othanda ukulala ibhola futhi une-Late Jose Antonio Reyes njengesithombe sakhe, bekungokwemvelo nje ukuthi uDaniel Ceballos athandane nalo mdlalo omuhle.
UDani Ceballos, lapho wayeseminyakeni ye-7 ehlangana nesizini ye-2003-04 lapho uLate Reyes wayeyingxenye yeAququibles yaseArsenal FC edlula kuleyo sizini engakaze ihlulwe futhi iwine iPremier League.
I-Arsenal Attincibles - 49 Games Unbeaten
Le feat ehlaba umxhwele yabona izintshisekelo zikaDani Ceballos ezidelelekile ukuba ngumdlali webhola. Ekuqaleni, waqala wakhe ibhola liphunyuka egumbini lokuhlala lomndeni wakhe kodwa ngokuhamba kwesikhathi waqhubekela phambili ukudlala emasimini e-Utrera.
Akuzange kuthathe isikhathi ngaphambi kokuthi uDaniel abe nesiphiwo sokwenza zonke izinhlobo zezinto ngebhola lezinyawo elimshukumisela ukuba aye ezivivinyweni namakilabhu aphezulu eSpain. Lapho ethola ubizo lokuya ezivivinyweni lapho I-Sevilla academy, injabulo ekhonjiswe yiwo wonke amalungu omndeni wakhe yayingenamingcele.
I-Dani Ceballos Ingane Yendaba Yobuntwana kanye ne-Untold Biography Amaqiniso- Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
UDani wadlula ezivivinyweni zeSevilla academy ngemibala ezindizayo futhi wangena esikhungweni sokufunda eneminyaka engu-8 ngesikhathi se-2004-2005, isizini nje ngemuva kokuthi i-Arsenal ibe nombukiso wayo ongabonakali. Njengoba nje iningi lezingane, bekumnandi ukujoyina iqembu lentsha yeSevilla FC nawe uqobo kwakudingeka enze imihlatshelo eminingi njengamabala okuzalwa alahlekile noma izinto ayezilangazelela ekhaya lomndeni wakhe.
UDaniel omncane ofanekiselwe ngezansi wenze umxhwele ekuqaleni neklabhu njengoba esiza abalingani bakhe ekuwineni indebe yabo yokuqala.
UDaniel Ceballos- Ukuphila Kwasemsebenzini Kwasekuqaleni. Isikweletu ku-IG
I-Dani Ceballos Ingane Yendaba Yobuntwana kanye ne-Untold Biography Amaqiniso- Umgwaqo oDumela Igama
Esikhungweni semfundo ephakeme, uDaniel omncane wayenokuzimisela okuqinile ukwenza amaphupho akhe afezeke futhi izifiso zakhe zokufinyelela eqenjini lokuqala leklabhu azibonakalanga njengento edlula.
kwavela inkinga skuze kube ekuqaleni kwakhe umsebenzi wakhe. OKUFANELE UDani Ceballos ikhishwe ku-2009 yiSevilla academy ngenxa ye Inkinga yesifo se-bronchitis.
UDani Ceballos Road to Fame Indaba
QAPHELA: Ngokuya ngokusesha kwe-Google, i-bronchitis engapheli inhlobo eyodwa COPD (izifo ezingama-pulmonary ezingamahlalakhona). Endabeni kaDani Ceballos, wayelimele ngamashubhu esibeletho futhi esishisa eduze kwenhliziyo yakhe ekhiqiza umunyu omningi. Lesi simo siholele ekutheni uDaniel Ceballos akhweze futhi akhale kanzima yingakho enza i-academy yakhe ukuba ifinyelele esinqumweni sokuqeda umsebenzi wakhe nabo.
Noma iyiphi ingane eye yaphila ngalolu hlobo lokugula kulesi sigaba somsebenzi wabo izokwazi kahle kakhulu izinhlungu ezijulile ezingokomzwelo ezingabangela. Abazali bakaDani basiza indodana yabo ukuphatha isimo sayo sempilo. Baye bamvumela ukuthi asondele emndenini wakubo okokuqala wamenza ukuba athathe ikhefu emsebenzini wakhe, base bemvumela ukuthi aqhubeke nokudlala ibhola le-CD Utrera ngenkathi elathola ukwelashwa.
I-Dani Ceballos Ingane Yendaba Yobuntwana kanye ne-Untold Biography Amaqiniso- Ukuphakama Kumlando Wendaba
Ngemuva kweminyaka embalwa ngokuqondile ngonyaka we-2011, uDani Ceballos waba ngcono. Unqume ukuqhubeka nokukhula kwakhe kobusha e-Real Betis ngemuva kokusayina nabo kwi2011.
UDani ubesazimisele ngokuqinile ukwenza amaphupho weqembu lakhe lokuqala afezeke. Uthi bewazi?… Ngemuva kokuphuma emabangeni ahlukene esikhungweni semfundo ephakeme, uDani usayine inkontileka yobuchwepheshe neReal Betis ku-22 ngoFebhuwari 2014 noma ngisesengumfana. Ukugqamiswa kwakhe okukhulu ekilabhini bekusiza iqembu lakhe ukuthi liphumelele iSegunda División I-La Liga 2 indondo.
UDani Ceballos uphethe i-Real Betis Trophy yakhe nomklomelo
Ngemuva nje kokuwina indondo, akuzange kuthathe isikhathi eside ukuthi uDanie aguqukele ekuqhubekeni kwebhola laseSpain. Waba yi-Real Madrid scouts enxenxa ukuthi isayinwe. Ngokuqondile on I-14 Julayi 2017, iReal Madrid imemezele ukusayinwa kweCeballos kwisivumelwano seminyaka eyisithupha.
Ekuqaleni, konke kwahamba kahle kuye ekilabhini. Kepha umzuzu onzima womsebenzi wakhe wafika Zidane uthathe isinqumo sokumshiya I-modric futhi Kroos. Umzuzu okhathazayo kakhulu ngoDani wafika Zidane wamsebenzisela i engakholelwale 28 imizuzwana womdlalo ubhekene noLeganes, isenzo esenze ukuthi abampofu uDani (osesithombeni ngezansi) babone isidingo sokuthola enye indawo ukudlala umdlalo wakhe.
UDani Ceballos ushiya iphimbo ngemuva kokusebenzisa amasekhondi we-28 emidlalweni
Ukubonisana nobaba kaLate Jose Antonio Reyes: Njengoba kushiwo, umzuzu wokucabanga okukhulu weza kaDaniel Ceballos ngokuqondene nekusasa lakhe neklabhu. Wake waveza ukuthi ukhulume nobaba we ongasekho uJose Antonio Reyes ngamazwi akhe ngezansi;
'Ngikhulumile noyise ngaphambi nje kokufika e-Arsenal futhi wangitshela ukuthi ngingacabangi kabili ngoba i-Arsenal iyiklabhu emangalisayo, ngigcizelela ukuthi indodana yakhe eyedlule uJosé yayinesikhathi esimnandi lapha.'
Bheka kwi-25 Julayi 2019, kumenyezelwe ukuthi uDaniel Ceballos ujoyine i-Arsenal kwisivumelwano semalimboleko sesikhathi eside futhi enikezwe inombolo eyisishiyagalombili ihembe ngaphambili elalishiywe ngu Aaron Ramsey.
UDani Ceballos ujoyina i-Arsenal. Ikhredithi ku- Independent
Umzuzu wokuzithokozisa wafika kuDaniel Ceballos lapho ebona isithombe sikamufi uJoseph Reyes njalo lapho eya enkundleni yezokuqeqeshwa. Lokhu kwamnika amathemba okusiza iklabhu ukuthi iphinde ithole ubukhazikhazi bayo obuphakathi nensimu.
Uthi bewazi?… Ukuqala kokuqala kukaDaniel kwiArsenal kwaphela ngaye ngokunikeza abasizi ababili futhi bawina umklomelo weMan of the Match.
UDaniel Ceballos owine indondo yemiklomelo yomdlalo kumdlalo wakhe wokuqala neklabhu. Ikhredithi ku- I-Marca
Abalandeli beArsenal bathi isitayela sakhe sokudlala kumdlalo wakhe wokuqala sihlanganisa ubuhle beRoll Royce nenjini kaMustang. Njengasikhathi sokubhala, uDaniel Ceballos ubonakala njengomunye phakathi komugqa wokukhiqizwa ongapheli wabasiki bebhola abamaphakathi abahlasele ukuzodlalela iklabhu yaseNorth London. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
I-Dani Ceballos Ingane Yendaba Yobuntwana kanye ne-Untold Biography Amaqiniso- Ukuphila Ubudlelwano
Uthi bewazi?… Abalandeli beArsenal balinde umzuzu wokwamukela uDaniel Ceballos kulo mdlalo. EMVA kwalokho okubalulekile bekuwukwamukela intombi kaDani Ceballos uMaria Sanchez Del Moral edolobheni elihle laseLondon.
UMaria Sanchez Del Moral ofanekiselwa ngezansi uneminyaka engu-24 ubudala ngesikhathi sokubhala. Lo nyaka ngokuvela kusho ukuthi mdala kakhulu kunesoka lakhe. Ubani onendaba!!… Iminyaka njengoba besho kuyinombolo nje.
Hlangana noMaria Sanchez Del Moral- Uthando lukaDani Ceballos Life. Isikweletu ku-IG
UMaria uvela eSeville, okuyidolobha lakubo elifanayo nendoda yakhe. I-WAG ebabazekayo yayisebenza njengomfundisi esikoleni sezingane enkulisa ngaleso sikhathi eMadrid ngaphambi kokujoyina isoka layo eLondon. Ngokuvumelana ne Ilanga, Ukufundisa kusegazini lomndeni wakhe njengoba umamakhe amfundise esikoleni. Ukuze anezele imali ayitholayo njengothisha, uDel Moral wayebuye enze eminye imodeli njengomsebenzi wesikhashana.
Bobabili bathanda izinyoni uDani Ceballos nentombi yakhe uMaria baqala ukuthandana kusukela nge2016, unyaka aqala ngawo impilo yakhe ephezulu yeReal Betis. Ubudlelwano babo obungemidlalo yedrama babona uDaniel Ceballos eqala ukuba ngabangane abahamba phambili kuMaria ngaphambi kokuba yonke into iguqulwe uthando lweqiniso.
UDani Ceballos noMaria Sanchez Del Moral. Isikweletu ku-IG
UDani ujabulisa abalandeli bakhe abangaphezu kwezigidi ze-1.6 ku-Instagram ngezithombe zakhe nentombi yakhe. Wake wabelane ngesithombe esinyantisayo ekhasini lakhe le-Instagram lapho ebonakala ngokukhululeka ngokuphelele ethokozela ibhendi lamachibi afudumele nentombi yakhe.
UCeballosl uyakuthanda ukuba nesikhathi esisezingeni eliphezulu nentombi yakhe
Ukwahlula indlela bobabili abathandi abahamba ngayo njengoba kubonakala ngezansi, kuyindaba yesikhathi ngaphambi kokuba bobabili banqume ukuthatha isinyathelo sangaphambili esiholela emshadweni wabo noma emshadweni wabo.
UDani Ceballos- Ukuvumela imizwa yakhe enze i-Talking. Isikweletu ku-IG
I-Dani Ceballos Ingane Yendaba Yobuntwana kanye ne-Untold Biography Amaqiniso- Ukuphila Personal
Ukwazi imininingwane kaDani Ceballos yomuntu uqobo ngaphandle kwephimbo kuzokusiza ukuthola isithombe esiphelele ngaye. Siqala ngombuzo othi; Yini eyenza uDani Ceballos Tick?
Yini eyenza uDani Ceballos Tick. Isikweletu ku-IG
Kude nodonga lwebhola, uDaniel Ceballos uyisimanga, uyisidlali, uyazethemba, unamandla futhi kunzima kakhulu ukumelana nawo. Uzibonakalisile ukuthi ungumuntu okwazi ukufeza noma yini afuna ukuyenza kunoma iyiphi ingxenye yempilo abazibophezela kuyo. Isibonelo siyabonakala emgaqweni wakhe futhi sikhuphuka sidume ngezindaba.
Ukwahlulela ngabasizi akunikeza ekuhambeni, uDani ngumuntu okwaziyo ukuhola abantu ekufezeni isisusa esabiwe- ukunqoba. Okokugcina, unamancoko amahle okwenza ukusebenzisana nabanye kube lula kakhulu.
I-Dani Ceballos Ingane Yendaba Yobuntwana kanye ne-Untold Biography Amaqiniso- Ukuphila Komndeni
UDani Ceballos unomndeni omkhulu bonke abangabokudabuka kwaSevillians. Uyaziqhenya ngobukhokho bakhe nezimpande zakhe ngezikhathi ezimnandi nezimbi. Onke amalungu omndeni; Umama wakhe, ubaba, umfowabo, udadewabo, umzala, umalume, umshana wakhe njll) aboniswe ngezansi bazimisele ukwenza noma yini ukuvikela abathandekayo babo.
UDani Ceballos agubha usuku lokuzalwa kwakhe namalungu omndeni. Isikweletu ku-IG
Uma uqhathanisa nomgwaqo wakhe onzima wodumo, uzobona ukuthi amalungu omndeni kaDani Ceballos, ikakhulukazi abazali bakhe beme ngakuye ngesikhathi ehlaselwa yi-(COPD) Chronic Obstifying Pulmonary Disease. Kuncane okwaziwayo ngokuhlala komzali wakhe, kepha into esiqinisekile ngayo ukuthi baphakathi kwabalandeli bakhe abahamba phambili. Manje ake sikwazise kudadewabo kaDani Ceballos, inombolo yakhe ye-1 fan.
Mayelana noDani Ceballos udadewethu: Hlangana noSamole, udadewabo kaDani Ceballos obizwa ngegama elifanayo nonina.
Hlangana noSalome Ceballos- udadewabo kaDani Ceballos. Ikhredithi ku- I-Elespanol
USamole Ceballos ungumsebenzisi okhuthele kakhulu ezinkundleni zokuxhumana futhi ungumlandeli othembekile womfowabo uDani. Njengabazali babo, akakaze angabaze kulezi zikhathi zakamuva ukuthi bamvikele ekugxekeni okubhekiswe kuye ngabalandeli ngokushiya iReal Betis yeMadrid. Kwake kwenzeka isikhashana, umyalezo kaSalomé lapho egxekwa umfowabo ngokusobala wawungowokuzinqunyelwa kuqala. Wake wathi;
“Mfowethu, uyisibonelo sokuzinikela nokunqoba, unakho konke. Ungumpetha. Uyalwa, uyahlaba umkhosi, uyagijima… WENZA konke ngokumamatheka. Ngizohlala ngikuxhasa ngebhola lakho, ngikutshele ukuthi ungumlingo, ukuthi uhlukile kwabanye. ”
Ukuba ngumlandeli omkhulu kaDani akuwona kuphela umsebenzi wosuku lwakhe. USalome oboniswe ngezansi nomfowabo ubuye abeaanologist ozigqaja ngokunikeza abantu ukuphathwa kobuhle.
UDani Ceballos nodadewabo- uSalome Ceballos. Ungumculi wenhliziyo nobungcweti. Ikhredithi ku- I-Elespanol
I-Dani Ceballos Ingane Yendaba Yobuntwana kanye ne-Untold Biography Amaqiniso- Indlela yokuphila
Ukunquma phakathi kokusebenza ngokweqiniso nokuzijabulisa nje okwamanje akusona isinqumo esinzima kuDani Ceballos. Njengasesikhathini sokubhala, imali eningi ezigidini zamaphawundi ibizwa ngegama lakhe ngenxa yobuchwepheshe bakhe bokukhetha njengomdlali webhola okhokhelwayo.
UDani Ceballos, njengamanje ngesikhathi sokubhala njengamanje AKUKHO kuphila impilo enhle kakhulu ebonwa kalula yizikhulu zezimoto ezinhle kakhulu njengoba kuboniswe ngezansi.
Dani Ceballos LifeStyle Amaqiniso
UDaniel Ceballos kulokho okubonakala sengathi akanayo inkinga enkulu yokuphatha imali yakhe yebhola nokusindisa ezinye usuku olunemvula.
I-Dani Ceballos Ingane Yendaba Yobuntwana kanye ne-Untold Biography Amaqiniso- Amaqiniso angaziwa
Uthi bewazi?… Kwaba ucezu wezindaba ezimbi I-Mesut Ozil lapho osemusha weReal Madrid ejoyina i-Arsenal ngemalimboleko.
UMesut Ozil wethuswe ukufika kukaDaniel Ceballos. Ikhredithi ku- Veza kanye ne-YouTube
Leso siginali esibi sinesizathu ngoba Ozil bekulokhu kungukuqagela okugcwele mayelana nekusasa lakhe ne-Arsenal. Unikezwe amandla okushiya iArsenal ngokwehlukana kwemali ngemuva kwesizini edumazayo ye-2018 / 2019 enyakatho neLondon. Okubaluleke kakhulu ukufunwa yiklabhu ukukhipha iholo lakhe njengomdlali oholelwa kakhulu kunabo bonke abathola i- £ 350,000-per-week.
Uthi bewazi?… Iningi labalandeli beArsenal alazi ukuthi uDaniel Ceballos unesibalo esihle sabantu abahlonishwayo nabekilabhu igama lakhe. Ngezansi kukhishwe ekhasini lakhe le-Wikipedia njengasesikhathini sokubhala.
UDaniel Ceballos Untold Honours kanye nemiklomelo. Isikweletu ku-Wikipedia.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Dani Ceballos Childhood Indaba yethu kanye ne-Untold Biography Amaqiniso. At LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
Iker Casillas Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts
UFernando Llorente Ingane Yendaba Yengane Plus Untold Biography Facts
U-Nacho Fernandez Ubuntwana Bombhalo Plus Untold Biography Facts
I-Isco Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts